Ugu dambeyntiina, iPhone 7 iyo 7 Plus ayaa innaga dhex jooga oo iyagu waa sidan | Waxaan ka socdaa mac
Shaki yar ayaa ka haray bal in mucjisada cusub ee injineernimada maanta la soo bandhigi doono waana in dhamaanteen aan raacno astaanta tufaaxa la qaniinay in aan la yaaban nahay si aan u aragno sida wanaagsan ee iPhone-ka cusub uu ula muuqdo isbeddelada qaabkiisa iyo sidoo kale hal-abuurnimada cusub ee ay ku hoos keento aluminiumka. Waa taleefan leh naqshad joogto ah laakiin haddii aan bilowno inaan falanqeyno hagaajinta lagu soo daray waxaan ku dhameysan doonaa aqbalida in kuwa Cupertino ay sii wanaajiyeen xitaa kuwa aan laga adkaan karin.
IPhone-ka cusubi wuxuu leeyahay nashqad aan si gaar ah ugu aragnay waxyaabo badan oo daadanaya waana bilo aan ognahay in anteenooyinkooda dib loo habeeyay, in kaamirada dambe aysan yeelan doonin giraanta iyo in nooca Plus uu kor u kacayo. muraayadaha kamaradaha laba-laabka ah ee isbeddelka ku sameyn doona suuqa moobiilka inkasta oo uusan ahayn terminal-kii ugu horreeyay ee kor u qaada
Apple waxay soo bandhigtay iPhone cusub, taleefan aan lahayn naqshad cusub oo xagjir ah laakiin leh isbeddello la xiriira qaabeynta iPhone 6 iyo 6S. Waxaan leenahay jir leh qaab isku mid ah, oo kiiskan ku imaan doona midab kale. Waxaan yeelan doonaa wadar ahaan shan midab Kuwaas oo aan ku soo koobi karno Dahabka, Qalinka, Dahabka Dahabiga ah, Jet Black (dhalaalaya) iyo Madowga. Markii ugu horreysay tan iyo markii aan hayno labada sawir iPhone 7 Plus wuxuu leeyahay farqi aad u wanaagsan Ilaa iyo inta kamaraddeeda ay ka walwalsan tahay, waa inay ku rakibtay kamarad leh laba dareemayaal oo aan si faahfaahsan uga hadli doono maqaal kale, oo ka duwan iPhone-ka 4-inji oo leh kamarad cusub oo 7 megapixel ah laakiin muraayadaha fudud. Kameradda iPhone 12 Plus waxaan awoodi doonnaa inaan sawirro ka qaadno markii ugu horreysay taas oo aan ku arki karno qoto dheerida goobta waqtiga dhabta ah, ikhtiyaar aan la imaan doonin iOS 7 illaa dhammaadka sanadka. Sidoo kale sheeg in kamaradan cusub ee iPhone 10 Plus waxaad awoodi doontaa inaad sameyso illaa 7x zoom ah adigoon lumin tayada.
Mid kale oo ka mid ah sharad weyn ee Apple ay la gashay terminalkan cusub ayaa ahaa baabi'inta, markii ugu horreysay ee warshadaha taleefanka gacanta, ee codka maqalka iyada oo la doorbidayo in wax soo saar maqal ah oo dijitaal ah laga helo dekedda hillaaca. Sababtaas awgeed, iPhone-kan cusub ayaa ah kii ugu horreeyay ee leh dhawaaq dhawaaq ah waxaana godka jaakada loo adeegsaday in lagu helo afhayeenka labaad. EarPod-yada la siin doono iPhone-ka cusub waxay yeelan doonaan isku xira hillaac iyo beddelo hillaac-to-Jack ah ayaa sidoo kale lagu dari doonaa. Sida ugub ah, Apple sidoo kale waxay soo bandhigeysaa sameecado cusub oo wireless ah, AirPods.
Waxa la dhaho marka la eego awoodaha lagu iibin doono. Ugu dambeyntii kuwa Cupertino waxay macsalaameeyaan awoodda 16 GB Si aad uhesho tusaale aasaasi ah oo leh 32 GB oo keyd ah iyo mid ugub ah, u gudub xadka dhexe oo leh 128 GB iyo qeybta ugu sareysa oo aan waxba ka badneyn oo aan ka yareyn 256 GB oo keyd ah.
Apple sidoo kale way joojisay inay hagaajiso akhristaha faraha ID-ka ee ID-ga oo hadda aad ugu dheereeya furitaanka aaladda iyo waliba haysashada fursado cusub oo loo isticmaalo Iyo sida xogta xiddigaha wax aanan fileynin ayaa ah in iPhone-ka cusub uu leeyahay iska caabin biyo la mid ah tan Apple Watch. Hadda, xitaa saxaarada SIM waxay leedahay nooc ka mid ah cinjir gudaha ah taas oo ka dhigaysa aaladda inay leedahay caabbinta heerka IP67 ee biyaha iyo boodhka. Sida shaashadeeda, sidoo kale waxay leedahay tiknoolajiyad cusub oo waa 25% dhalaal marka lagu daro sii wadida tikniyoolajiyadda 3D Touch
Gudaha, iPhones cusub ayaa ku lifaaqan midka cusub A10 Fusion processor taas oo ah 40% dhakhso ah taas oo ka dhigaysa taleefanka macno ahaan "duul".
Terminalka ayaa la iibin doonaa dufcadii ugu horeysay ee wadamada bisha Sebtember 16, taas oo boos celin laga sameyn karo 9ka Sebtember. Xaaladdan oo kale, Isbaanishku waxay ku jirtaa qaybtii ugu horreysay ee dalal. Maqaallada isdaba jooga ah, tifaftirayaasha Soy de Mac ayaa si faahfaahsan kaaga faaloonaya mid kasta oo ka mid ah sheekooyinka cusub ee taleefankan cusub ee Apple. Sii wad akhriska maxaa yeelay waxaan ku tusi doonnaa mid kasta oo ka mid ah wararka qormooyinka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » iPhone » Ugu dambeyntiina, iPhone 7 iyo 7 Plus ayaa naga mid ah waana sidan